Gawaarida baabuurka ee fasaxyada qoyska oo guuleysta ee Morocco - TELES RELAY
ACCUEIL » QODOBO • heshiisyo • DHAQAALAHA • Featured »Gawaarida kirada ee guulaha qoyska ee guusha ee Morocco
Xilliga xagaaga oo kaliya hareeraha geeska, waa dabiici ah inuu bilaabo inuu ka fikiro fasaxyada qoyska. Inkastoo ay taasi noqon karto wakhti nasasho ah oo loogu talagalay qaar ka mid ah, waalidiintu waxay og yihiin in safarka u baahan yahay qorshe iyo urur badan. Haddii aad go'aansatay inaad sannadkan fasax ka qaadato Morocco, si aad iskaga ilaaliso diiqada marka aad tagto aduunka cusub, waxaan kugula talineynaa inaad kiraysato baabuur. Waa tan sababta.
Helaan raaxo leh adigoon jabin bangiga
Xitaa haddii lacagtaada lacagta lagu tiriyo, taasi micnaheedu maahan inaadan kiraysan karin baabuur si aad u qaadato qoyskaaga dhowr maalmood oo badda ah si ay ugu raaxaystaan ​​hirarka, qorraxda iyo hawada cusbada ee Morocco. Xaqiiqdii, tani waa fursada ugu fiican ee lagu heli karo gadaasha gawaarida sare ee baabuurka oo aan si kale loo helin sababo dhaqaale. Haddii aad horey u soo dhigatid hore, waxaa laga yaabaa in aad ku aragto laydhka yar ee bogagga sida comparatiflocationdevoiture.fr, kaas oo liiska dalabyada ugu fiican ee suuqa ku jira si aad u dooran karto doorasho ku habboon. Marka la barbardhigo dhammaan tartamayaasha, naqshadahan ayaa kuu oggolaanaya inaad ogaatid yaraynta yareynta si deg deg ah isla markaana si weyn u yareeya waqtigaaga raadinta.
Iska ilaali in la jebiyo aag dhul ah
Haddii aad gaadhay gaariga sanado badan, waxaa dhici karta inaad ogtahay in ay u badan tahay in ay ku dhacdo dhibaato farsamo. Waxay noqon kartaa mid caqli gal ah in la kiraysto gaari halkii laga isticmaali lahaa gaarigaaga iyo shilalka meel dhexe, sida wadada u dhexeeya Essaouira iyo Zaouiet Bouzarktoune tusaale! Inkasta oo labada magaalo oo kaliya ay kala fogaanayaan masaafo 28, gawaarida laguma dhajin karo geeska R301, wadada kaliya ee u dhaxeysa labada magaalo. Intaa waxaa dheer, sida ku xusan abdicard.com, shirkadaha kirada badankood badankood waxay bixiyaan caymis ku meel gaar ah macmiilkooda si ay u ilaaliyaan haddii ay dhacdo xaalad shil ama dhibaato farsamo. Waxaa lagu talinayaa in ay bixiso ilaalin noocaan ah, sababtoo ah macaamiishu mararka qaarkood waxay ka badan karaan xaydhada 20.000 ee Morocco.
Ka baxso nolol maalmeedka
Waxaan ku qaadannaa saacado badan baabuurkeena caruurteena! Iibinta baabuurtu waa hab weyn oo wax looga beddelo noloshooda oo aad noloshaada u fududayso, oo ay ku jirto doorashada SUV. Sida laga soo xigtay sida ay u socoto, qiyaasta litir ee naaftada naaftada ah ee celceliska 10 ee Morocco, oo aan dib ugu soo noqonayn qaali ka badan markaad buuxiso Cameroon. Gaadhi meelo badan oo baabuurka ah, waxaad ku rakibi kartaa shaashadaha gadaasha dambe ee gaariga si caruurtaada loogu oggolaado in ay daawadaan filim inta aad qorsheyneyso safarka intiisa kale ee aad la leedahay xaaskaaga.
Sidaa daraadeed, haddii ay tahay inaad bixiso wax yar oo raaxo ah, waxaad yareyneysaa fursadaada in caajis ahaan lagu caajiso jidka, ama si aad u jebiso jadwalka, kireynta gaariga waa hab weyn oo lagu hubiyo inaad ka baxdo Fasaxyada wanaagsan ee Morocco.
Madaxwaynaha Golaha Qaranku wuxuu ku eedeeyay awoodaha ajnabiga ah ee taageeraya xeryaha ku hadla afka Ingiriiska ee Cameroon
Qashinka qashinka: Saddex shirkadood ayaa kor u qaada mashiinka Hysacam ee Douala
Wimbledon, Kate Middleton iyo Meghan Markle "waxay doonayeen inay muuqdaan ...
Hindiya: Vande Bharat Express oo laga yaabo inay ka imanayso bisha soo socota, Delhi ilaa Katra saacadaha 8 | India News
DADKA & LIFESTYLE4,140